भिडियो च्याट रूले। 2022
भिडियो च्याटको बारेमा
संचार आधुनिक व्यक्तिको एक मुख्य आवश्यकता हो। तर कार्य दिन हामी मध्ये अधिकांशको लागि यस्तो तरिकाले व्यवस्था गरिएको छ कि हामी त्यस्तै कुरा गर्न सक्छौं, यसका बारेमा साँझमा मात्र काम पछि काम गर्ने। एक वार्तालाप छनौट गर्नमा एक समस्या छ। जे भए पनि तपाईले घर कतै छोड्नु पर्छ। र भोली फेरि काम गर्न वा अध्ययन गर्न। र अब संचारको समस्या आधुनिक व्यक्तिको सामना गरिरहेको छ: म वास्तवमै एक अन्तर्वार्ता भेट्न चाहन्छु जसको साथ तपाईं जीवनको बारेमा केवल "गडबडी" गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई डराउन, कसैको प्रशंसा गर्न, नयाँ फिल्महरू वा भर्खरको शीर्ष फिल्महरूमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहि समयमा घर छोड्ने र कुरा गर्ने लक्ष्यको साथ कतै घुम्ने समय छैन। र अब यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ कुनै बाटो छैन। तर निराश नहुनुहोस्। आधुनिक साधनहरू र सर्वशक्तिमान ईन्टरनेटको लागि धन्यवाद, सबैजना आज आफ्नो आदर्श वार्तालाप सीधा अनलाइन पाउन सक्छन्। सञ्जालसँग संचारको लागि यति धेरै स्रोतहरू छन् कि एक आधुनिक व्यक्तिले घर छोड्ने कि भनेर सोच्न पनि आवश्यक पर्दैन। म भिडियो च्याटको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। वा बरु, भिडियो च्याटको बारेमा १० सबैभन्दा लोकप्रिय प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। त्यसो भए, आउनुहोस्:
00 00 ०००१। VIDEOCHAT के हो?
भिडियो च्याट आज मुख्यतया बिभिन्न देशहरुका बिभिन्न व्यक्तिहरु बीचको सञ्चारको लागि स्रोत हो। त्यहाँ निश्चित रूपले संसाधनहरू छन् जुन एक विशेष भाषा वा एक विशेष देशको लागि अभिमुखी छन्। तर प्राय: जसो स्रोत, यो बहुराष्ट्रीय छ। यहाँ, व्यक्ति भिडियो क्यामेरा प्रयोग गरेर सञ्चार गर्छन्। वार्तालापकर्ताहरु एक अर्कालाई हेर्दछन् र सुन्छन्, त्यसैले संचारको प्रक्रिया धेरै, वास्तविकतामा मिल्दोसँग मिल्दोजुल्दो छ। फरक मात्र यो हो कि तपाईंले कसैलाई चिया treat सँग व्यवहार गर्नुपर्दैन)
२.7009 V साधारण भिडियो कुराकानीबाट भिडियो अध्याय र रुलेट बीच के भिन्नता छ?
भिडियो च्याटको धेरै प्रकार र प्रकारहरू छन्। तपाईं केवल एक वार्तालाप चयन गर्न सक्नुहुन्छ र कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं भिडियो च्याट रूलेटको स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो लागि संचार अधिक र अधिक चरम बनाउनुहोस्। र वार्तालापका लागि पनि। के चरम हो? कुनै पनि कुराकानी छान्दैन भन्ने तथ्य। यस कुराकानीमा वार्तालाप दुर्घटना द्वारा पर्याप्त प्रस्ताव गरिएको छ। अर्को व्यक्तिको बारेमा तपाईले पहिल्यै केही थाहा पाउन सक्नुहुन्न जससँग तपाईले अर्को क्षणहरु (वा मिनेट र घण्टा सम्म) कुरा गर्नुहुन्छ। सबै कुरा यहाँ अनियमित छ: कुराकानीको छनौट, संचारको समय, संचारको भाषा, संचारको लागि विषयहरू र यस्तै, यस्तै। यो धेरै व्यक्ति जो केवल कुराकानी गर्न त्यहाँ जानका लागि एक आकर्षक भिडियो च्याट रूलेट हो।
00 00 ०० 3।। रूलेट भिडियो च्याटको सदस्य को हुन सक्छ?
वास्तवमा, ठूला र ठूला कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्। अवश्य पनि, एक सहभागी १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्ति हुन सक्दैन। तसर्थ, यदि एक जवान मानिस वा केटी १ 18 बर्ष भन्दा माथिको छ, तब स्वागत छ।आधुनिक च्याटराउलेटले धेरै प्रकारका सञ्चारहरू प्रस्ताव गर्दछ। यो साझा कोठामा सञ्चार हो, र निजीमा सञ्चार, कुराकानीको साथ तथाकथित निजी कुराकानी। जे भए पनि, सहभागी १ absolutely बर्ष भन्दा माथिको पूर्ण रूपमा कोही हुन सक्छ। त्यहाँ लि political्ग, राजनीतिक र धार्मिक विचार, र उमेर बाहेक अन्य प्रतिबन्धहरुमा बिल्कुल कुनै प्रतिबन्धहरु छन्। त्यसैले, विभिन्न चासो र विकासको स्तरको साथ व्यक्तिहरू यहाँ भेट्छन्। र यो धेरै, धेरै चाखलाग्दो छ। विशेष गरी जब तपाईं निश्चित रूपमा जान्नुहुन्छ कि तपाईंलाई जति धेरै व्यक्ति यो व्यक्तिलाई भेट्ने सम्भावना हुँदैन, खास गरी वास्तविक जीवनमा।
00 00०० 4।। भुक्तानी वा नि: शुल्क?
भिडियो च्याट रूलेटमा प्राय जसो प्रकार्यहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्। तर त्यहाँ सशुल्क प्रस्तावहरू पनि छन्। यी, एक नियमको रूपमा, अतिरिक्त विकल्पहरू जुन तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, धेरै जसो स्वतन्त्र संचार पर्याप्त छ। त्यसोभए आउनुहोस्, के च्याटमा भिडियो च्याटमा नि: शुल्क प्रस्ताव गरिनेछ, र के भुक्तानी गरियो।
यहाँ निःशुल्क सुविधाहरू छन्:
00 00०००० एक यादृच्छिक वार्तालाप 97 00००००8 को साथ संचार
एक विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्ने क्षमता
00 00००00 संचारको भाषा छनौट गर्ने सम्भावना र अर्को देश वा विशिष्ट शहरबाट वार्तालापकर्ता
र यहाँ भुक्तान सुविधाहरू छन्:
00 97००00 नियमित संचार साझेदारहरूको सूचिमा एक अनियमित व्यक्ति थप्नुहोस्
00 00 ००7 संचारको लागि निजी क्षेत्रमा संक्रमण
00 00०००० संचारको गुणस्तर सुधार गर्न एक स्रोतबाट विशेष बोनस प्राप्त गर्दै
अवश्य पनि, त्यहाँ थप पोइन्टहरू छन् जुन प्रत्येक भिडियो च्याट रूलेटमा थोरै फरक हुन सक्दछ। तर मैले मुख्य बुँदाहरू सूचीबद्ध गरेको छु।
00 00 ००।। के कुराकानी मन पराउँदैन भने के हुन्छ?
वास्तवमा, आज सबै चीजहरू सकियो ताकि भिडियो च्याट रूलेटका प्रत्येक आगन्तुकले सहज र आत्मविश्वास महसुस गरे। तर अझै, सबै होईन, सबै संचार साझेदारहरूबाट टाढा, हामी मनपर्न सक्छौं। सबै कुरा वास्तविक जीवनमा जस्तै हुन्। हामी कसैलाई मन पराउँछौं र हामी यो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न जारी राख्छौं। र कसैले हामीलाई कुनै पनि हिसाबले गर्दैन, र म यो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न चाहन्न। तर यदि वास्तविक जीवनमा हामी आफैले मन नपराउनेहरूसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्न गाह्रो छ, तब अनलाइन हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सजिलो छ। र यदि तपाई एकाएक आफूले मन नपराएको मान्छे मनपराउँनु भएन भने, यो बन्द गर्न एकदम सजिलो छ। यो "अर्को" भन्ने एकल बटनले गर्न सकिन्छ। अ In्ग्रेजीमा यस बटनलाई भनिन्छ: "अर्को"। यो बटन थिच्नको लागि यो पर्याप्त छ, जतिसक्दो अर्को राम्रो अभिव्यक्तिको लागि अर्को उम्मेदवार संचारको लागि तपाईंलाई प्रस्ताव गरिन्छ।
अवश्य पनि, यो सबै सजिलो र सरल छ। तर तपाइँ यस तथ्यको लागि पनि तयार हुनु आवश्यक छ कि तपाइँ एक वार्तालापको रूपमा, बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अर्को व्यक्तिको लागि पनि स्विच गर्न र आदानप्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।र यहाँ तपाई वास्तवमै केहि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए, एउटा एकल बटन "अर्को" र भोइला, तपाइँसँग पहिले नै कम्प्युटर स्क्रिनको अगाडि फरक संचार साझेदार छ।
Private 00 ०० 6।। "निजी संचार" भनेको के हो र यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने?
प्रत्येक च्याट रूलेटमा धेरै च्याट कोठा हुन्छ। तर त्यहाँ दुई मुख्य छन्:
00 00 ०007 निजी
साझा कोठा अन्तर्गत संसाधनको सम्पूर्ण ठाउँ बुझाउँछ। र यहाँ नियमहरू सबैका लागि समान हुन्। साझा कोठामा कुनै पनि संचार अनियमित छ। र सञ्चारको प्रक्रिया ठीक अगाडि जारी रहन्छ सम्म यस प्रक्रियामा सहभागीले कुनै एक "अर्को" बटन क्लिक गर्दैन। यो बटन थिच्ने बित्तिकै (कसले पनि बेवास्ता गरेनन्), सञ्चार समाप्त हुनेछ।
तर त्यहाँ सामान्य नियमको लागी एक रमाईलो अपवाद छ। यो तथ्य हो कि प्रत्येकले, यदि चाहिएको हो, निजी कोठामा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछ। एक निजी कोठा रूलेट स्रोतमा एक विशेष र संरक्षित ठाउँ हो, जब संचार लामो समय सम्म तपाईले चाहानुहुन्छ र एकै पल्टको लागि वा एक बटन थिच्दा यो सञ्चार रोक्न सकिदैन। निजी संचारको अर्थ निजीमा सबै सञ्चारको हो जहाँ कुनै अपरिचित व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्दैन। यो संचार, जब तपाईं सामान्य कोठामा भन्दा अलि बढी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। र यो निजी संचार हो जुन प्राय जसो भिडियो च्याट रूलेमा भुक्तान गरिन्छ। एक निजी संचार क्षेत्रमा एक विशेष वार्तालाप आमन्त्रित गर्न को लागी, यो संचार र voila को लागी तिर्न पर्याप्त छ, कोठा खुला हुनेछ र कुराकानी प्रतिबन्ध बिना जारी रहनेछ। यो यस्तो प्रकारको निजी संचार हो जसले भिडियो च्याट रूलेमा अधिकांश आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
अवश्य पनि, केही प्रतिबन्धहरू यहाँ अवस्थित छन् निजी सञ्चारको क्षेत्रमा। तर प्राय: यस गोपनीयता क्षेत्र भुक्तान गर्नु अघि यी प्रतिबन्धहरू पढ्न सकिन्छ।
00 00०० 7।। तपाइँ रूलेट भिडियो च्याटमा के कुराकानी गर्न आवश्यक छ?
संचार, र कुनै (अफलाईन पनि) केही साधनहरू र संसाधनहरू आवश्यक छन्। यदि हामी भिडियो च्याट रूलेमा सञ्चारको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामीलाई फन्डहरूको लागि केहि आवश्यकताहरू चाहिन्छ। वास्तवमा, प्रायः सबै आधुनिक व्यक्तिहरूले सजिलै विडियोचट रौलेट वेबसाइटमा जान सक्छन् र कुनै पनि अनियमित व्यक्तिको साथ कुराकानी सुरु गर्न सक्दछन्।
त्यसोभए, तिनीहरू यहाँ छन्, च्याटराउलेटमा च्याट गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने सब भन्दा न्यूनतम आवश्यकताहरू।
Format 00००00 कम्प्युटर पर्याप्त शक्ति संग भिडियो ढाँचामा एक बैठक आयोजित गर्न
00 97००7 राम्रो गुणको माइक्रोफोन
सिद्धान्तमा, यो सबै यो संसाधनमा कुराकानी गर्न आवश्यक छ। स्वाभाविक रूपमा, एक माइक्रोफोन र वेबक्यामको लागि आवश्यकताहरू पनि बढाइएको हुनुपर्दछ। माइक्रोफोन उत्कृष्ट गुणवत्ताको हुनु पर्छ।एक राम्रो माइक्रोफोन सफल संचार को लागी एक महत्वपूर्ण तरीका हो।
एक वेबक्याम पनि एक धेरै महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। राम्रो वेबक्यामले चित्रहरू र भिडियो स्थानान्तरणलाई ढिलो बनाउनु हुँदैन। कुनै पनि कुराले क्यामेराको दुबै पक्षको व्यक्तिको सञ्चारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
र स्वाभाविक रूपमा, कम्प्युटर आफैंमा पर्याप्त शक्तिशाली हुनुपर्दछ कि केहि पनि ढिला छैन। ताकि कुनै पनि कुराकानीमा हस्तक्षेप गर्दैन।
00 00 00० 8।। के म वार्तालापको लागि खोजी मापदण्ड सेट गर्न सक्छु?970०००
भिडियो च्याट रूलेट सबैभन्दा पहिले, रमाईलो मनोरञ्जन हो। त्यसकारण, यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि प्रत्येक आगन्तुक यहाँ रमाईलो गर्न र अन्य चाखलाग्दो व्यक्तिहरूसँग च्याट गर्ने उद्देश्यको साथ आउँदछन्। र एक संचार साथीको अनियमित छनोट पनि धेरै रमाईलो छ। तर कहिलेकाँही म कुरा गर्न चाहान्छु, यद्यपि कुनै अनियमित पार्टनरको साथ, तर केहि संचार प्यारामिटरहरूको साथ। त्यसकारण, मालिकहरू र डेभलपरहरू कोसिस गर्दै र सकेसम्म सबै कुरा गर्दैछन् ताकि भिडियो च्याट रूलेटको प्रत्येक आगन्तुकले समस्या बिना नै कुराकानी गर्न सक्दछ केवल कसैलाई मात्र होइन, तर कसलाई एक अन्तर्वार्ताकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिने छ भनेर जान्नुहोस्। कम्तिमा लगभग। भिडियो च्याट रूलेका लागि अधिक स्रोतहरूमा आज तपाईं निम्न प्यारामिटरहरू अनुसार पार्टनरहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ:
00 00००7 फ्लोर 00 00००००8
00 00००7 उमेर 00 00००००8
00 00००7 भाषा 00 00००००8
यो यी मानदण्डहरू छनौट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, जस्तै उनीहरू भन्छन्, आफैंमा वार्तालाप। र भिडियो च्याट रूलेटको प्रत्येक आगन्तुकले या त छनौट गर्न वा तिनीहरूको बेवास्ता गरेर सही भावनात्मक र जीवन्त अनलाइन संचार सुरू गर्न अधिकारको फाइदा लिन सक्दछन्।
00 00००0099। भिडियो च्याटमा किन रूले प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ?
भिडियो च्याट रूले व्यक्ति बीचमा कुराकानीको लागि सिर्जना गरिएको हो भन्ने तथ्यको बावजुद, सधैं प्रतिबन्धित हुने खतरा रहन्छ। यो अद्भुत संसाधनको प्रत्येक आगन्तुकलाई केको लागि प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ भनेर हेरौं। सामान्यतया, निम्न निषेध उल्लlate्घन गर्ने प्रयोगकर्ताहरूमा निषेध लगाउनुहोस्:
00 00 ०००00 एक व्यक्तिको सम्मान र मर्यादा को कुनै पनि रूप मा अपमानजनक। सामान्यतया, कुनै पनि अपमानले प्रतिबन्धको लागि नेतृत्व गर्न सक्दछ। त्यसकारण, यस स्रोतमा कुनै पनि संचारको आधार शिष्टता र पारस्परिक सम्मान हो। 00 00००8
कुनै पनि वस्तुको 00 00 ०००7 विज्ञापन। विज्ञापन निषेधित छ। र त्यो सहि छ। जे भए पनि, साइट सिर्जना गरिएको हो ताकि व्यक्तिहरू कुरा गर्न र विचारहरू आदानप्रदान गर्न सक्दछन्, र कुनै उत्पादन वा सेवाको लागि विज्ञापन सुन्न सक्दैनन्। 00 00००8
00 00०००० अपमानजनक पारस्परिक सहमति बिना र निजी क्षेत्रमा मात्र। 00 00००8
00 00००00 स्प्याम पनि निषेधित छ। अझै, मलाई लाग्छ कि कसैले पनि यसलाई मन पराउँदैन यदि तिनीहरूले यो स्पाम को लागी एक मंच को रूप मा मात्र प्रयोग गर्छन्।प्रतिबन्धहरू सरल र सीधा छन्। यदि तपाईंको वार्तालापकर्ताले उनीहरूलाई उल्ल vio्घन गरेको छ र त्यसबाट तपाईंलाई संचारको मजा लिनबाट रोक्दछ, भने तपाईं जहिले पनि यसको बारे परियोजना प्रशासकलाई गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्य एकदम चाँडै लिने छ। यो सत्य हो कि, यदि त्यहाँ एक उजुरी छ भने, तत्काल प्रतिबन्धको अनुसरण हुँदैन। तर एक चेतावनी आवश्यक हुनेछ। यदि त्यहाँ बिभिन्न व्यक्तिबाट धेरै गुनासोहरू छन् भने, तब प्रतिबन्ध छिटो र कुनै चेतावनी बिना हुन सक्छ।
CH 00०० 10 १०। भिडियो अध्याय राउलेटबाट कसले लाभ लिन सक्दछन्?
आधुनिक संसारमा धेरै मानिसहरू संचारमा धेरै सीमित छन्। त्यसकारण, भिडियो च्याट रूलेट जस्ता संसाधनहरू केवल रमाइलो गर्ने तरिका मात्र होइन, तर प्रशिक्षण मैदान पनि हुन सक्छ। को लागि? धेरैको लागि, धेरै व्यक्तिको लागि। उदाहरण को लागी, यो स्रोत निम्नलिखित व्यक्तिको लागि उपयोगी हुन सक्छ:
00 00००००7 को लागि जो वास्तविक जीवनमा मानिससँग कुराकानी गर्न लजालु छन्। 00 00००8
00 for००००7 जो मानिसहरुलाई अनुरोध अस्वीकार गर्न गाह्रो लाग्छ। यहाँ तपाई सजिलै सिक्न सक्नुहुनेछ कि कसरी पहिले अरुको ध्यान तपाईको ध्यान परिवर्तन गर्ने। तर यो खतरा पनि हुन सक्छ। वास्तवमा, वास्तविक जीवनमा, तपाईं केवल एक व्यक्ति बन्द गर्न सक्नुहुन्न र विभाजित दोस्रोमा कुरा गर्न रोक्न सक्नुहुन्छ। 00 00००8
00 00००00 those जो एक आत्मा जोडी खोजिरहेका छन् वा केवल विपरीत लिंगको साथ कुराकानी गर्न सिकिरहेका छन्। 00 00००8
00 ०००० जो मानिस प्रेम र कुराकानी को लागी सरल छ। 00 00००8
त्यसोभए, जुनसुकैले बोले पनि, च्याटरोलेटले हाम्रो अनौंठो ग्रहको धेरै मानिसहरू माझ अत्यन्त हकदार सम्मान पाउँदछ। र त्यो राम्रो छ। यसको मतलब यो हो कि मानिसहरु अझै पनी आफ्नो प्रकारको संग जीवन्त संचार मा रुचि राख्छन्।